Reality ကဘာလဲ? — Steemkr
လူအများစုဟာအဖြစ်မှန်ကယ့်ကိုအဘယျအကွောငျးကိုအတှငျးမှရပ်တန့်ကြပါဘူး။ များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့စကားလုံးဖြစ်ဟန်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုဖို့ "အဖြစ်မှန်" သို့မဟုတ်ကတဖက်သတ်မှန်ဘီလူးမှတဆင့် အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုတဦးတည်းအဖြစ်မှန်အဲဒီမှာဖြစ်သင့်ပုံရသည်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်သောအရာကိုလူရဲ့အမြင်အပေါ်မှီခိုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အတှေး, ခံစားခကျမြားနှငျ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအာရုံပေါ်တွင်အခြေခံသည်မဟုတ်။ ဤသုံးပါး တွေကိုအဖြစ်မှန်၏ နှောင့်အယှက်။ ဒါဆိုအဖြစ်မှန်ကဘာလဲ?
၎င်း၏စစ်မှန်သော မှာအဖြစ်မှန်ရိပ်မိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေး, ခံစားခကျမြားနှငျ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအာရုံသင့်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကပိုနည်းသည်ဘာမျှမ-အချည်းနှီးဖြစ်၏ရိုးရှင်းစွာအရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါသည်ကားအဘယ်သို့နှင့်သင်္ချာတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သိပ္ပံအားဖြင့်ဟုဆိုသည်။ သင်္ချာ၏တခုလုံး၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအချည်းနှီးသောအစု နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤသည်ကဘာမှမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တည်မှု၏အလွတ်စာရွက်, အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေး, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်အာရုံမပါဘဲဝိညာဏ်၏ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့ရိပ်မိသောအရာကိုသို့အတှေး, ခံစားခကျမြားနှငျ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအာရုံထိုးသွင်းနေကြသည်အဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦး ကိုကတဆင့်လက်တွေ့ကြုံနေရနေကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုအဘို့, သင်ကကုလားထိုင်ကိုကြည့်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်အတွေး, ခံစားချက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံသင်ကရိပ်မိပုံကိုကြားဖြတ်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲကုလားထိုင်ကိုမြင်ရလျှင်, ကုလားထိုင်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်အဖြစ်ကုလားထိုင်တစ်ခုကုလားထိုင် (သို့မဟုတ်အခြားအတှေး) ဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ကုလားထိုင်အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုခံစားဒါမှမဟုတ်ကုလားထိုင်တစ်ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိခြင်းကြောင့်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, ကကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အားလုံးတည်ရှိတဦးတည်း- ဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြာကြှနျုပျတို့၏စိတျထဲမှာထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီလူနေမှုခွဲခြားခဲ့ကြပြီး-လူနေမှုကျနော်တို့က၎င်း၏ အသေးစိတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြခံရသောကြောင့်, ငါတို့သည်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အရာအားလုံးကိုမှအမည်များကိုပေးပြီသောကြောင့်ငါတို့သည်လေ့လာတစ်ဦးချင်းစီအရာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုနှင့်ရှုထောင့် သောကြောင့်, ကျနော်တို့အကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက် ကိုဖန်တီးကြ အမှုအရာများခွဲခြာ။ အဖြစ်မှန်ရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းဖြစ်တည်မှုဖြစ်တယ်, မရှိအချည်းနှီးသောအာကာသ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ထားတဲ့ရူပဗေဒဖြင့်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤအက်ဆေးကိုရိုက်ထည့်ဖို့အခုအချိန်မှာပေါ်မှာထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအဆိုပါကုလားထိုင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ကျောက်ဆောင်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလူစည်ကားရာအရပျ, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုမရေမတွက်နိုင်သောခင်းကျင်းင်အဖြစ်က သာလျှင်။
အဖြစ်မှန်မြေတပြင်လုံးသည်, သို့သော်လည်းတဲ့ဝိရောဓိတစ်ခုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဝဠာကိုယ်နှိုက်ကဟန်ချက်ညီဖို့သတ်မှတ်သော်လည်း, ကလည်းအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၏ဒုတိယဥပဒေထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆို, ပရမ်းပတာနဲ့ရောဂါတစ်ပြည်နယ်ဆီသို့ဦးတည်နေပါသည်။ သော်လည်းဒေသအလိုက်ကျနော်တို့ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးထိုကဲ့သို့, တပြင်လုံးကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတဖြည်းဖြည်း ကို ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးနေသောဖြစ်လာနေသည်။ သို့သော်ဝဠာသိသိဖြစ်ပြီး, သည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံး ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြပေသည်ပြီးနောက်အသစ်တခုစကွဝဠာပေါက်မယ်လို့သီအိုရီရှိပါတယ်။ ဤသည်မှာသော်လည်း, သာထင်ကြေးဖြစ်နိုင်သည်။ စကြဝဠာဟာဝေးအနာဂတ်၌ရောဂါအတွက်ကျန်ရစ်ရင်တောင်ငါတို့ရှိသမျှသည်က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အစအဦးမှာပြန်ရှာနေ၎င်း၏တည်ရှိမှုအတွက်အရာအားလုံးကိုယခု ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဘန်-နှင့်ကျော်ကြားသောထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်ငါတို့ရှိသမျှသည် ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အဖြစ်မှန်ပါဝင်သည်ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီဖြစ်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့ထဲကနေလုံးကိုလမ်းအနာဂတ်ကိုအများဆုံး မှပစ္စည်းကနေအပေါ်ကိုသယ်ဆောင်။ အနှစ်သာရမှာတော့ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကုလားထိုင်ကနေတပြင်လုံးကိုစကွဝဠာရန်, အမှန်တကယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေး, ခံစားချက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ၏ဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲ, အားလုံးအဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီထိုးဆေးအသုံးမပြုသဖြင့်၎င်း၏စစ်မှန်သော မှာအဖြစ်မှန်ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလူတို့သည်မိမိတို့ အပ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်ကူးနိုင်သလား? ကျနော့်အမြင်တွင်, လူသားအပေါငျးတို့သမိုက်မဲငွိမျးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာမြေက၎င်း၏ဟန်ချက် restore လို့အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ကြားမှကျနော်တို့တစ်လောကလုံးရောဂါအတှကျအခေါင်းနှစ်လုံးနေကြသည်။
esteem reality true life